Showing १११-१२० of १७९ items.
विजयपुर । एक अबोध बालक गाउघरमा पिठाे कुट्न प्रयोग गरिने ओखलमा कपडाको डोरीले बाधिएर प्लाष्टिकमा खाना खाएका हृदयविधारक घट्ना जोकोहीलाई सुन्दा कथा झै लाग्नन सक्छ । तर पाचथरको मिक्लाजुङ गाउपालिका वडा नं. ५ कुरुम्बाका ५ बर्षीय बालकको नियति हो यो । अवोध ती बालक दुई बर्षको उमेरदखि यसरी नै विताइरहेका थिए । तर केही सहयोगी हातलहरुले तीन बर्षपछि अहिले उनको उद्धार गरेर बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको बच्चा ओपिडीमा उपचार गराउन सफल भए ।ती पाचबर्षीय अवोध बालक हुन् मित्रहाङ सम्हाङ्फे । जसले यो नियति भोग्नुपर्यो । पीडित बाबु अभिनन्दन सम्हाम्फे गरिबीका कारण पैसा कमाउन ०७१ साल माघमा मलेसिया गए । मल
प्रकाशित मितिः मंसिर १५, २०७५
१,४८९ पटक पढिएको
'भुइमा बसेर लेख्थ्यौँ'
भाइबहिनी हो, गोरखा दक्षिण बाहु चौथोबाट पुरस्कृत केशव नेपाली धरानका शिक्षा क्षेत्रमा अग्रणी हुन् । भौतिक शास्त्रमा उनले स्नातकोत्तर गरेका छन् । त्यति मात्रै हैन, उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा लामो समयसम्म अध्यापनसमेत गरे । धरानको विजयपुर स्कुलका संस्थापकसमेत हुन् । धरानको निजी शिक्षाको क्षेत्रका एक हस्तीसमेत हुन् । उनको स्कुले अनुभवः नेपालीले १८ फेब्रुअरी १९४६ धर्तीमा पाइला टेके । विराटनगर-१४ मा जन्मिएका उनी त्यो बेला अहिलेको जस्तो विराटनगर थिएन । खाली ठाउहरू धेरै थिए । सानोमा जता डुले पनि हुने खाल्को खाली-खाली थियो । ६ वर्षको उमेर भएपछि हजुरआमा, आमाले स्कुल पठाउनुभयो । त्यो बेला अहिलेको जस्त
प्रस्तुतिः भोजराज श्रेष्ठ
उपदान र सेवा सुविधाबिनै अवकास
विराटनगर/सरकारले गत साउनदेखि यातायातको सेण्डिकेट खारेज गरेपछि त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीहरूलाई उपदान र सेवा सुविधाबिनै अवकास दिएर अन्याय गरेको पीडित कर्मचारीले बताएका छन् । पूर्व नेपाल यातायात व्यवसायी सङ्घमा आवद्ध ५६ जना कर्मचारीहरू अन्यायमा परेको बताएका हुन् । सेण्डिकेट खारेज भए पनि सङ्घमा आवद्ध ५६ जना कर्मचारीहरूले पाउनु पर्ने उपदान र सेवा सुविधासहितको १ करोड ६५ लाख रुपैयाँ अझै पाउन सकेका छैनन् । सङ्घ खारेज भएको भन्दै पन्छिदा उनीहरू बिचल्ली परेका हुन् । सङ्घले सरकारबाटै सेवा सुविधा लिनु भन्दै अवकास दिएको छ । सरकारले सेण्डिकेट खारेज गरे पनि कर्मचारीहरूलाई सेवा सुविधा दिलाउन र सम्पत्ति जिम्मा
प्रकाशित मितिः मंसिर १४, २०७५
ताप्लेजुङ सदरमुकामसँग जोडीए सबै स्थानीय तह
ताप्लेजुङ/भौगोलिक हिसावले विकट मानिएको ताप्लेजुङका सबै स्थानीय तहमा यातायातको पहुँच पुगेको छ । भारत र चीनसँग जोडिएको हिमाली जिल्ला ताप्लेजुङको मिक्वाखोला गाउँपालिकामा सवारी साधन पुगेसँगै जिल्लाका ९ वटै तहका नागरिकले गाडीबाटै सदरमुकाम आवतजावत गर्न सक्ने भएका हुन् । फुङलिङ नगरपालिकासँग जोडिएको मिक्वाखोला गाउँपालिकामा तमोर नदीबाट सवारी साधन तारिएसँगै जिल्लाको सबै स्थानीय तहमा सडकको पहुँच पुगेको छ । फुङलिङ नगरपालिका–९ हाङ्देवावाट तमोर तरेर मिक्वाखोला–२ को थुम्वावेँसीमा गाडी पुगेका हो । तमोरमा १२ वटा ह्युम पाइप राखेर तारिएको मिक्वाखोला–२ का वडाध्यक्ष सुरेश थापाले जानकारी दिए ।
लिम्बुवान–किरातका लागि दबाव दिने तयारी
इटहरी/ संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चले एक नम्बर प्रदेशको नाम लिम्बुवान–किरात–खम्बुवान राख्न दवाव दिने भएको छ । मञ्चले रिपोर्टस क्लब इटहरीमा शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रदेश १ को नामका लागि दबाव दिने जनाएको हो । दुई तिहाईको सरकारले साना पार्टीहरूलाई पेल्दै प्रदेशको नामकरण र राजधानी तोक्न खोजेकाले विरोधका शसक्त कार्यक्रम गर्ने जनाएको छ । संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका प्रान्तीय महासचिव असोक चेम्जोङले लिम्बुवान–किरात–खम्बुवान नाम राख्नका लागि संसद भवन अगाडि धर्ना दिने, अनिश्चितकालीन धर्नालगायतका कार्यक्रम गर्ने जनाए । मञ्चका महासचिव चेम्जोङले प्रदेश १ को भन
३ नेपालीलार्इ गाेली लाग्याे, ६ काे अवस्था गम्भीर
धरान । अफगानिस्तानको काबुलमा विद्रोही समूह तालिबानको आक्रमणमा परी ९ जना नेपाली घाइते बनेका छन् । त्यसमध्ये ३ जनालाई गोली लागेको अन्तराष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले उल्लेख गरेका छन् । ३ जना सामान्य घाइते छन् भने ६ जनाको अवस्था गम्भीर रहेको अफगानिस्तान प्रहरी स्रोतलाई उल्लेख गर्दै नेपाली मिडियाहरूले उल्लेख गरेका छन् । सुरक्षा गार्ड उपलब्ध गराउने बेलायती संस्था जिफोरएसको कार्यालयमा बुधबार शक्तिसाली आत्मघाती कार हमला गरिएको थियो । जसमा १० जनाको मृत्यु भएको थियो भने २९ जना घाइते भएका थिए । जसमध्ये ९ जना नेपाली रहेको जनाइएको छ । गोली लागेका तीन नेपालीमध्ये एकजनाको पेटमा अर्काको देब्रे तीघ्रामा गोली ल
३,०७१ पटक पढिएको
सिरहामा बलात्कारीलाई कारबाही माग
सिरहा । सिरहाको सुखिपुर नगरपालिका–२ (छजना) सामूहिक बलात्कार घटनाका दोषीलाई चाडो नियन्त्रणमा लिई कडा कारबाही गर्न स्थानीयले माग गरेका छन् । दुईसाता बितिसक्दा पनि प्रहरीले दोषीको खोजी गर्न नसकेको भन्दै आक्रोशित स्थानीय र अधिकारकर्मीको समूहले इलाका प्रहरी कार्यालय पतारीमा शुक्रबार धर्ना दिएको हो । गाउँमा छैठको उपलक्ष्यमा नाटक भइरहेको बेला गत कात्तिक २७ गते राति घरमै सुतिरहेको अवस्थामा स्थानीय समशुल मियाँ, इसराफूल मियाँ, छिमेकी गाउँ जगतपुरका सलामद मियाँ र जाकिर मियाँले गाउँकै ३५ वर्षीय महिलामाथि सामुहिक बलात्कार गरेका थिए । मुखमा कालोपट्टि बाँधेर आएका उनीहरूले महिलालाई निर्घात रूपमा कुटप
धरान/ न्याय कुर्न कति सकस छ, धरान–५ का बलात्कृत पीडित तथा परिवारलाई नै थाहा होला । तर, पनि १६५ दिनदेखि न्याय कुर्न बाध्य छन् पीडित परिवार । ठिक यतिबेला देशभर महिला हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियान चलिरहेको छ । तर पीडित न्यायको पहुँचभन्दा बाहिर छ । अधिकारकर्मी कोठे बैठक, र छलफलमा मस्त छन् । पीडितका पक्षमा वकालत नहुँदा पीडक धरान–५ साउनेका झमक बस्नेतजस्ता अपराधी खुलेआम हिडिरहेका छन् । पीडक पक्षका आफन्त बारम्बार मिल्नका लागि लाखौंको प्रलोभन देखाउँछन् । तर पीडित न्याय चाहान्छ । ‘हामीलाई न्याय चाहिएको छ । अपराधीलाई कारबाही भएँ हामीलाई केही चाहिदैन ।’ पीडित बालिकाको बुबा भन्छन्
काठमाडौंमा बालकको अपहरणपछि हत्या
काठमाडौं / काठमाडौंमा एकबालकको अपहरणपछि हत्या भएको छ। गोंगबुमा रहेको त्रिवेणी स्वस्तिका गेष्ट हाउसका सञ्चालक प्रदीप कुँवरका ८ वर्षीय छोरा प्रयासको विहीबार हतत्या भएको छ । उनी मंगलबारदेखि हराएका थिए । उनको अपहरणपछि हत्या भएको महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाका एसएसपी धिरजप्रताप सिंहले बताउका छन् । एसएसपी सिंहको नेतृत्वमा गएको प्रहरी टोलीले बालकको शव म्हैपी नजिकैको पुलमुनि फेला पारेको थियो । घटनामा संलग्न रहेको आशंकामा प्रदिप कुँवरको गाडी चालक महेन्द्र सार्कीलाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान शुरु गरेको छ ।बालकको अपहरणपछि उनले फिरौती वा अन्य कुनै माग राखेको नभए पनि प्रहरी स्रोतका अनुसार मालिकले निकालि
प्रकाशित मितिः मंसिर १३, २०७५
नेपाली सेनाका सेनानीसहित १७३ कारबाहीमा
काठमाडौँ / नेपाली सेनामा विभिन्न पदको भर्ना प्रक्रियामा भएको अनियमितामा संलग्न १९ अधिकृतसहित १७३ जनालाई कारबाही गरिएको छ । विसं २०७३ र २०७५ सालमा सेनामा खुलेको भर्ना प्रक्रिया सैनिक अधिकृतसहितले व्यापक अनियमिता गरेको पुष्टि भएपछि १७३ जनालाई सैनिक ऐनअनुसार कारबाही गरिएको छ भने आरोपित चारजना अधिकृतसहित १४ जनालाई सफाई दिएको छ । त्यसैगरी प्रमुख सेनानीसँग स्पष्टीकरण लिइएको बुझिएको छ । अनियमितामा संलग्नबाट रु तीन करोड २२ लाख ७५ हजार बिगो भराउनसमेत सैनिक अदालत (कोर्ट मार्शल) ले आज फैसला गरेको जनसम्पर्क तथा सूचना निर्देशनालयले जनाएको छ । अन्य दुई दर्जालाई छ वर्ष कैद,